Permalink Reply by Thin Zar on August 20, 2015 at 14:11
Either Or ကို ဘယ်လိုနေရာတွေမှာသုံးကြတာများပါသလဲ.. အသုံးပြုပုံလေးသိချင်ပါတယ်ရှင့်...
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 16:53
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းအား ဆရာများကို ပြထားပါတယ်။ ဤကဏ္ဍတွင် ရွေးချယ်ထားသော မေးခွန်းအတွက် အဖြေအား နောက်အပတ်တွင် တင်ပေးပါမယ်။
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 28, 2015 at 17:46
Either...or / Neither...nor ရဲ့ ရှင်းပြချက်များနဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို ဤနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by yae mon on August 20, 2015 at 15:56
please! how can be use "joke words"
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 25, 2015 at 16:54
မေးမြန်းခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ မေးခွန်းအား ဆရာများကို ပြထားပါတယ်။ ဤကဏ္ဍတွင် ရွေးချယ်ထားသော မေးခွန်းအတွက် အဖြေအား နောက်အပတ်တွင် တင်ပေးပါမယ်။ မိမိသိလိုသော အကြောင်းအရာများကို အသေးစိတ်မေးမြန်းနိုင်ရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
Permalink Reply by Myo Htet on August 20, 2015 at 16:16
Where and how is 'just' used?Please.
AdminPermalink Reply by Myanmar Network Forum Moderator3 on August 28, 2015 at 17:47
Just ရဲ့ ရှင်းပြချက်များနဲ့ အသုံးအနှုန်းများကို ဤနေရာမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
Permalink Reply by Isabella Swift on August 20, 2015 at 16:37
Sth က somthingဆိုတာသိထားပါတယ် Sbကဘာလဲဖြေပေးပါ အသုံးများနေတော့သိချင်လို့ပါ
Permalink Reply by Mr. Kyaw Min Thu on August 21, 2015 at 9:41
Permalink Reply by Zin Maw Oo on August 24, 2015 at 10:12
Sb stands for "somebody".
Permalink Reply by Han Thi on August 24, 2015 at 16:59
I think, it's mean is "Somebody".